Daah-furkii Degmada Cusub Ee Boodaleey - Cakaara News
Daah-furkii Degmada Cusub Ee Boodaleey
Boodaleey (cakaaranews ) Khamiis 7dii April 2016, Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu daah-furayay Degmada cusub ee Boodaleey ee katirsan degmooyinkii cusbaa ee lagudaray Gobalka Qoraxay ayaa waxaa kasoo qaybgalay masuuliyiin sarsare oo uu horkacayo Gudoomiyaha Gobolka Qoraxay Mudane Yuusuf AadanYuusuf.
Hadaba xafladan daah-furka ah oo ay kasooqaybgaleen dad aad u farabadan oo isugujrta bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhalinyarada, cuqaasha, hooyooyinka, odayaasha, iyo culimo awdiinka ayaa waxaa ugu horayn furitaankeedii kahadlay Gudoomiyaha Gobolka Qoraxay mudane Yuusuf Aadan Yuusuf oo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay kasooqaybgalka iyo furitaanka xafladan lagu daahfurayo degmada cusub ee boodaleey oo katirsan Gobalka qoraxay. Wuxuuna gudoomiyhuhu u mahadceliyay dhamaan bulshadii kasooqaybgashay xafladan degmada cusub ee boodaleey.
Sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu xusay in degmadani ay kutaala meel staratigi ah oo aad ugu baahnayd in degmo laga dhigo waa hore. Wuxuuna carabka kudhuftay in xaruntan boodaleey ee deegaanka dulqabaw ay tahay meelihii nabadiidka UBBO ay ku dhuumaalaysan jireen.
Wuxuuna Gudoomiyuhu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay hadalo baraarujin ah isagoo ku booriyay bulshada ree-dulqabaw inay soo maal gashadaan degmada cusub ee boodaleey islamarkaana ay soo magaaleeyaan, nabad-galyadeedana ay ka shaqeeyaan.
Dhanka kale, waxaa iyana kahadlay qaar kamida odayaashii kasooqaybgalay oo sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin daahfurka degmada cusub. Waxayna sheegeen inay soo dagayaan islamarkaana ay maal gashanayaan nabad galyadeedana ay ka shaqaynayaan.
Ugu danabayna gudoomiyaha Gobolka Qoraxay Mudane Yuusuf Aadan Yuusuf ayaa dhagax dhigay mashaariico Horumarineed oo isugujira iskuulo, iyo Caafimaad.
Sikastaba ha ahaatee, degmadan cusub ee deegaanka dulqabaw ayaa xarunteedu tahay Boodaleey waxayna xad laleedahay degmooyinka kala ah shaykoosh, Qabridahar, Garbo, Dhanaan iyo Burqod